ဒီ မျက်မမြင်အဖွားအို ဟောခဲ့တာတွေအတိုင်း အခုဖြစ်နေတဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာတွေက တိုက်ဆိုင်တာလား…တကယ်လား..။ - APANNPYAY
Home / ဗေဒင်ကဏ္ဍ / ဒီ မျက်မမြင်အဖွားအို ဟောခဲ့တာတွေအတိုင်း အခုဖြစ်နေတဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာတွေက တိုက်ဆိုင်တာလား…တကယ်လား..။
ဒီ မျက်မမြင်အဖွားအို ဟောခဲ့တာတွေအတိုင်း အခုဖြစ်နေတဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာတွေက တိုက်ဆိုင်တာလား…တကယ်လား..။
Apann Pyay 10:22 PM ဗေဒင်ကဏ္ဍ Edit
ထိတ်လန့်ဖွယ် Baba Vanga ရဲ့ ဟောကိန်းများ
၁၉၉၆ တွင်သေဆုံးခဲ့သည့် မျက်မမြင်Vanga အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ်ဟောကိန်းများဟာ မှန်ကန်ခဲ့တာကြောင့် သူမဟာကမ္ဘာကျော်ခဲ့ပါတယ်။သူမ အသက် သုံးနှစ်အရွယ်ကတည်းကပင် သူမရဲ့ မိဘနှစ်ပါးလုံးသေဆုံးခဲ့ပြီး သူမအသက်၁၂မှာ မျက်စိကွယ်ခဲ့ပါတယ်။Vanga ဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး ဖြစ်ပေါ်လာမည့်အကြောင်းတွေ၊ ဆိုဗီယက်ယူနိယံကြီးပြိုကွဲမည့်အကြောင်း၊ အရှေ့ဂျာမနီနှင့် အနောက်ဂျာမနီပူးပေါင်းသွားမည့်အကြောင်း၊မင်းသမီး ဒိုင်ယာနာသေဆုံးမည့်အကြောင်းတွေ၊ အင်ဒိုနီးရှားဆူနာမီဖြစ်ပေါ်မည့်အကြောင်းတွေ၊ world trade center ဖြိုချခံရမည့်အကြောင်း၊ဆီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပေါ်မည့်အကြောင်း၊ ၄၄ယောက်မြောက်အမေရိကန်သမ္မတဟာ လူမည်းဖြစ်မည့်အကြောင်းစသည့် ကမ္ဘာ့ထိတ်လန့်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်များကို သူမမသေဆုံးမီကပင် မှန်ကန်စွာ ဟောကိန်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာ သူမသေဆုံးမည့်ရက်နှင့် ကမ္ဘာကျော်တချို့ရဲ့ သေဆုံးမည့်ရက်အတိအကျကိုပင် မှန်ကန်စွာဟောကိန်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သူမရဲ့ ၂၀၁၆ ဟောစာတန်းဖြစ်သည့် ISIS အဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာမည့်အကြောင်း၊ မွတ်စလင်များ ဥရောပကို နေရာယူလာမည့်အကြောင်း၊တရုတ်နိုင်ငံအင်အားကြီးမားလာမည့်အကြောင်းတွေဟာလဲ လတ်တလော မှန်ကန်နေသည့် ဖြစ်ရပ်များပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ ရှေးဖြစ်ကိန်းဟောစာတန်းများဟာ ဗုဒ္ဓရဲ့ ဟောကိန်းများဖြင့်ကိုက်ညီမှုရှိတာကိုလည်း အံ့အားသင့်ဖွယ်တွေ့မြင်ရပါတယ်။
နောက်ဘုရားတစ်ဆူပွင့်ပြီး မှ ကမ္ဘာပျက်မည့်အကြောင်းဟာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ တို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ့နဲ့ကြိုက်ညီနေပါတယ်။သူမဟောကိန်းထုတ်ခဲ့စဉ်တုန်းကတော့ လူအများစုဟာ မဖြစ်နိုင်ဖူးပေါကြောင်ကြောင် ဟောကိန်းများဟု လှောင်ပြောင်ခဲ့ကြသော်လည်း ထိုခေတ်အခါက ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကြားတောင်မကြားဖူးသည့် ဆူနာမီကဲ့သို့ ဖြစ်ရပ်များဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
သူမရဲ့ဟောကိန်းတွေအထဲ လတ်တလော စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့ အာဖရိကန် နွယ်ဖွားအမေရိကန်သမ္မတဟာ အသက်ရှင်သည့်နောက်ဆုံးသမ္မတဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့။ဒီဟောကိန်းဟာ အိုဘာမားကို ဆိုလိုခဲ့တာပါ။ဒီဟောကိန်း မှန်မမှန်ကတော့ လတ်တလောစောင့်ကြည့်ကြရမှာပါ။
၂၀၁၆: အစွန်းရောက် မွတ်စလင်မ် တို့ ဥရောပ ကို ကျူးကျော်မည်။ ယနေ့ ဥရောပဒေသသည် ဓာတုလက်နက်ဖြင့် စနစ် တကျ လူမျိုးတုံး တိုက်ဖျက်မှုကြောင့် ပျောက်ကွယ် သွားမည် ဖြစ်ပြီး ဘာမှမကျန်တော့သည့် စွန့်ပစ်မြေကဲ့သို့အလား ပျက်သုန်းသွားမည်။
၂၀၁၈:တရုတ်သည်စူပါအင်အားရှိသောနိုင်ငံကြီးဖြစ်လာပြီး အမေရိကန်သည် စတင်ယိုယွင်းလာမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၂၃: ကမ္ဘာ့ပတ်လမ်း ပြောင်းလဲသွားမည်။ (ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ ဘယ်သူမှ မသိ)
၂၀၂၅: ဥရောပ ဒေသ၏ လူဦးရေသည် သုံညနားသို့ ကပ်သွားလိမ့်မည်။
၂၀၂၈: လူသားတို့ ဗီးနပ်စ်ဂြိုလ်ကို စွမ်းအင်ရှာဖွေရေးအတွက် ခရီးထွက်ခွာလိမ့်မည်။
၂၀၃၃: ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့် ရေခဲတောင်များ အရည်ပျော်ကာ ပင်လယ်ရေ မျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာလိမ့်မည်။ (ဒါ ဖြစ်ပြီး နေပြီ။)
၂၀၄၃: ဥရောပဒေသကို အစ္စလာမ် ကာလီဖိတ်ဒေသ အဖြစ် အသွင်ပြောင်းရေးသည် ပြီးပြည့်စုံပြီ ဖြစ်သည်။ ရောမမြို့သည် မြို့တော်ဖြစ်လာမည်။ ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး လှုပ်ရှားမှု အားလုံးကို
မွတ်စလင်မ် တို့ ချုပ်ကိုင် အုပ်စိုးမည်။
၂၀၄၆: ကိုယ်တွင်းအဂါင်္တွေကိုထုတ်လုပ်လာနိုင်ကာ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့လူကြိုက်အများဆုံးကုသမှုတွေ့လာလိမ့်မယ်
၂၀၆၆: အမေရိကန်တို့ ရာသီဥတုပြောင်းလဲရေး လက်နက်သစ် တစ်မျိုးကို ပထမဆုံး အကြိမ် စတင် ထုတ်သုံးကာ ရောမကို ပြန်တိုက်ယူမည်ဖြစ်ပြီး ခရစ်ယာန်ကို ပြန်လည် အသက်သွင်းလိမ့်မည်။
၂၀၇၆: ကွန်မြူနစ်ဝါဒသည် ဥရောပနှင့် အခြားသော နေရာများတွင်ပါ ပြန်လည် ဦးမော့ လာမည်။
၂၀၈၄: သဘာဝတရား ပြန်လည်ရှင်သန်လာမည်။ (ဤအချက်လဲ မည်သူမျှ နားမလည်သေး)
၂၀၈၈: စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း အရွယ်အိုသွားစေတဲ့ရောဂါအသစ်ပေါ်လာမယ်
၂၀၉၇: ထိုရောဂါကို ကုသနိုင်မယ်
၂၁၀၀: လူသားတို့ပြုလုပ်ထားသော “နေအတု” သည် ကမ္ဘာ့ ညအခြမ်းကို တောက်ပစွာ အလင်းပေးနိုင်မည်။ (၂၀၀၈ ကထဲက စတင်နေပြီဖြစ်သည်။ နူကလီယား ဖြူးရှင်းစနစ်ဖြင့် လည်ပတ်မည့် နေတုစီမံကိန်း အကြောင်း ရှာဖတ်ပါလေ။)
၂၁၂၅: အာကာသမှ ထူးခြားတဲ့အချက်ပြမှု ဟန်ဂရီမြို့မှာတွေ့လိမ့်မယ်
၂၁၃၀: ဂြိုလ်သားတို့၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် လူသားတို့သည် ရေအောက်တွင် နေထိုင်နိုင် မည် ဖြစ်သည်။
၂၁၇၀: ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးအနှံ့ မိုးခေါင်မည်။
၂၁၈၇: ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မီးတောင်နှစ်တောင် ပေါက်ကွဲခြင်း လုံးဝရပ်တန့်သွားမည်။
၂၂၀၁: နေ၏ စွမ်းအင် ချက်လုပ်မှု နှေးလာသည်နှင့်အမျှ ကမ္ဘာပေါ်သို့ ကျရောက်သော အပူချိန်သည် လည်း ကျဆင်းလာလိမ့်မည်။
၂၂၂၁: အပို-ကုန်းအသက်အဘို့ရှာဖွေရေးအတွက် လူသားများက ကြောက်မက်ဖွယ်ရာတခုခုနဲ့ အဆက်သွယ်ရလိမ့်မယ်
၂၂၅၆: အာကာသယဉ်တစင်းမှ ရောဂါအသစ်တခု ကမ္ဘာမြေကိုပါလာလိမ့်မယ်
၂၂၆၂: ဂြိုလ်များ ပတ်လမ်း ပြောင်းကုန် ကြပြီး မားစ်ဂြိုလ်သည် ဥက္ကာခဲများ၏ အန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင်ရမည်။
၂၃၆၄: နေတုပေါ်တွင် ချို့ယွင်းမှုတစ်ခု ဖြစ်သောကြောင့် မိုးပိုခေါင်လာမည်။
၂၂၇၁: ရူပဗေဒဆိုင်ရာဥပဒေများ ပြောင်းကုန်မယ်
၂၂၉၁: နေကတဖြည်းဖြည်းအေးလာမယ် ကြိုးစားပီးတော့ပြန်ပူအောင်လုပ်ရမယ်
၂၂၉၆: နေဂြိုလ်မှာပြင်းထန်တဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်မယ်။ ဆွဲငင်အားတွေပြောင်းကုန်မယ်။ အာကာသယာဉ်အဟောင်းတွေပျက်ကျကုန်မယ်
၂၂၉၉: ပြင်သစ်မှာ ခုခံလှုပ်ရှားမှုတခု အစ္စလန်ဘာသာဆန့်ကျင်ထမြောက်ကြလိမ့်မယ်
၂၃၄၁: ကာက်မက်ဖွယ်အရာတခု ကမ္ဘာကိုချဉ်းကပ်လာလိမ့်မယ်
၂၄၈၀: နေတု နှစ်လုံးတိုက်မိသောကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မှောင်အတိဖြစ်သွားမည်။
၃၀၀၅: မားစ်ပေါ်ရှိ ပဋိပက္ခကြောင့် မားစ်ဂြိုလ်လမ်းကြောင်း ပြောင်းမည်။
၃၀၁၀: လကို ဥက္ကာခဲ အကြီး တစ်ခု ဝင်တိုက်လိမ့်မည်။ ဥက္ကာခဲ အပိုင်းအစများနှင့် ပြာမှုန့်များ ကမ္ဘာကို အကွင်းလိုက် ဝန်းရံလိမ့်မည်။
၃၇၉၇: ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အရာအားလုံး သေဆုံးသွားတော့မည်။ လူသားမျိုးနွယ် တို့သာ နောက်ထပ် အဆင့်ပိုမြင့်သော ကြယ် အစုအဝေးတစ်ခုသို့ လွန်မြောက်သွားနိုင်လိမ့်မည်။
၃၈၀၃: ဂြိုလ်အသစ်မှာ လူနဲနဲဖြင့်စနေမယ်…
၃၈၀၅: သဃံဇာတအရင်းအမြစ်အတွက် စစ်ဖြစ်။ရှိတဲ့လူတဝက်ထက်ပိုမိုသေဆုံးနိုင်
၃၈၅၄: လူမှုယဉ်ကျေးမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို လုံးဝနီးပါးရပ်လိုက်နိုင်သည်။ လူတွေဟာ တိရစ္ဆာန်တွေလိုစုနေထိုင်ကြလိမ့်မယ်
၃၈၇၁: ဘုန်းကြီးတပါးက လူတွေကို ဘာသာရေးကြောင်းတွေ ပြောပြမယ် (ဘုရားတစ်ဆူပွင့်မလားတော့မသိဘူးဗျ)
၄၃၀၂: မြို့အသစ်တွေထူထောင်ပြီး သိပ္ပံပညာအသစ်တွေ နည်းပညာအသစ်တွေသိမယ်
၄၃၀၈: လူတွေရဲ့ဦးနှောက်ဟာသာမန်ထက် 34%ပိုပြီးထက်မြက်လာမယ်။မကောင်းသောစိတ်များ အငြိုးထားသောစိတ် အယူအဆများပျောက်ကွယ်သွားမယ်
၄၅၀၉: နောက်ဆုံးတွင် ဘုရားသခင်နှင့်ပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်စွမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောအဆင့်ထိရောက်မယ်
2016 :“Muslims” will invade Europe, which will “cease to exist” as we know it. The ensuing campaign of destruction will last years, driving out populations and leaving the entire continent “almost empty”.
2018 : American will start falling and China will become more powerful
2046: All bodily organs can be reproduced.
2100: Man-made sun illuminates the dark side of the planet (This is already in the pipeline — since
2008, scientists have been working on creating an artificial sun using nuclear fusion technology).
#Credit to original uploader
#Edited by Henry